Itoobiya iyo QM oo kulan ka yeeshay Hannaanka dib Loogu Soo Celinayo Adeegyadii bulshada ee deegaanka Tigray. - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Itoobiya iyo QM oo kulan ka yeeshay Hannaanka dib Loogu Soo Celinayo Adeegyadii bulshada ee deegaanka Tigray.
On Dec 3, 2020 436
Addis Ababa DEC 03, 2020 (Hidar 24,2013 T.I) (FBC/SOMALI)-Danjiraha iyo wakiilka joogtada ah ee Itoobiya u fadhiya qaramada midoobay Taye Atske Selassie, ayaa kulan la qaadatay kaaliyaha Xoghayaha-Guud ee Arimaha samafalka ahna Isuduwaha gargaarka degdega ah iyo Madaxa hay’adda isku dubaridka arrimaha bani-aadantinnimada (UNOCHA) Mr.Mark Lowcock.
Kulankan ayaa diirada lagu saaray heshiis ay kala saxeexdeen Itoobiya iyo QM oo ahaa sidii gargaarro bani’aadamnimo loo gaadhsiin lahaa Itoobiya gaar ahaana deegaanka Tigray.
Waxa xusid mudan in Itoobiya iyo QM ay shalay kala saxiixdeen heshiis saamaxaya in la suuro galiyo jawi ammaankooda lagu sugayo shaqaalaha hay’addaha samafalka ee ka hawlgalaya deegaannada ay gacanta ku hayso dawladu eek a tirsan deegaanka Tigray iyo deegaannada la deriska ah ee canfarta iyo Amxaarada.
Saraakiil Sare oo ka tirsanaa kooxda budhcada TPLF oo qaarna la sifeeyay ,kuwo kalena…
Imaaraadka Carabta oo dalalka Itoobiya iyo Suudaan ugu baaqay in ay dejiyaan xiisadda…
Xukuumadda Deegaanka Soomaalida oo 78 gaadhi ku wareejisay Ciiidanka gaarka ah ee DDS
Maasuuliyiin ka tirsan Xukuumada DDS ayaa kulan kula yeeshay Magaalada Djibouti…
Saraakiil Sare oo ka tirsanaa kooxda budhcada TPLF oo qaarna…
Mareyakanka oo weerar cirka ah ka fuliyay Soomaaliya
Aqalka Congress-ka Marayka oo soo Jeediyay Xil ka Xayuubin…
Imaaraadka Carabta oo dalalka Itoobiya iyo Suudaan ugu…
Xukuumadda Deegaanka Soomaalida oo 78 gaadhi ku wareejisay…